नेपाली ख्रीष्टियानहरूमाथि उठाइएका १० प्रश्नहरू र तिनका जवाफ : NepalChurch.com
गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्नु आजको सभ्य भनिएको समाजको अपरिहार्य पाटो हो । आफ्ना कमजोरीहरूको प्रतिफलस्वरूप आएका बौद्धिक विरोध वा प्रतिवादको सबैले स्वागत गर्न सक्नुपर्छ ।
१) के नेपालका ख्रीष्टियानहरूको यहाँ कुनै इतिहास छैन? के उनीहरू २-४ दशक अगाडि आएर हुकुम चलाउन खोज्नेहरू हुन् ?
नेपालमा सर्बप्रथम ख्रीष्टियान मिसिनेरीहरूको प्रवेश सन् १६२८ मा भएको थियो । तात्कालिन राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले पोर्चुगलका मिसिनेरी जेसुइट फादर जुआन काब्रललाई हार्दिकताका साथ् स्वागत गरेका थिए । राजाले फादरलाई एउटा ताम्रपत्र दिएर पुरस्कृतसमेत् गरेका थिए, जुन ताम्रपत्रमा इसाईमतको प्रचार गर्न अनुमति दिइएको थियो । त्यसपछि सन् १६६१ मा बेल्जियमका मिसिनेरी अल्बर्ट र अष्ट्रियाका मिसिनेरी जोहानले नेपाल भ्रमण गरे, तर उनीहरू लामो समय नेपालमा बसोबास गरेनन् ।
पछि गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा गरेपछि सन् १७६९ मा बिदेशी केपुचिन फादरहरूका साथमा दर्जनौं नेपाली ख्रीष्टियानहरूलाई पनि देशनिकाला गरेर भारतको बेतियातर्फ पठाइदिए । आज पनि भारतको बेतियामा तिनका सन्तानहरूलाई भेट्न सकिन्छ ।
नेपाली इतिहासको यो पाटोले स्पष्ट गर्छ कि नेपालका ख्रीष्टियानहरू भर्खर छिरेकाहरू होइनन् । राजा पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरीको डाँडाबाट काठमाडौं खाल्डोलाई हेर्नुअघि नै यहाँका थुप्रै मानिसहरू ख्रीष्टियान भइसकेका थिए । आधुनिक नेपालको एकीकरणको इतिहासभन्दा नेपालका ख्रीष्टियानहरूको इतिहास पुरानो छ ।
२) सत्रौं सताव्दीमा भित्रिएका ख्रीष्टियानहरू र सदियौंदेखि यहाँ चलिआएका अन्य धर्मका अनुयायीहरूको तुलना एकसमान कसरी हुनसक्छ ? ती दुवैथरिकाहरूको राज्यमाथिको अधिकार कसरी एकै हुनसक्छ ?
यतिबेला नेपाल देश र यहाँको धार्मिक विविधतालाई एउटा संयुक्त परिवारसँग तुलना गर्नु उचित लाग्यो । परिवारमा ८० बर्ष नाघेका बुढा मानिसहरू पनि छन्, र भर्खर २-३ बर्षका बालबालिकाहरू पनि छन् । यस्तो अवस्थामा ८० बर्ष नाघेका बुढा मानिसले- म यो घरको पुरानो व्यक्ति हुँ, मैले दशकौं अघिदेखि यस घरको निम्ति दु:ख गरेको छु, त्यसैले भर्खर जन्मेका बालबालिकाहरूको बाँच्न पाउने अधिकार र मेरो बाँच्न पाउने अधिकारको कुनै तुलना नै हुन सक्दैन । यिनीहरू त हिजो जन्मेका न हुन्, यिनीहरूको त्यति बढी हेरविचार वा वास्ता गरिनु आवश्यक छैन भनेर भन्यो भने के होला? के यो कुनै सुहाउने कुरा हो र?
४) त्यसो हो भने ख्रीष्टियानहरू किन जबर्जस्ति धर्मपरिवर्तन गराउँछन् त?
यो निकै गम्भीर सवाल हो । धेरैपटक उठेको सवाल पनि हो । बाइबलले त आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सिकाउँछ, आफ्नो शत्रुलाई समेत् प्रेम गर्न सिकाउँछ । बाइबलले अरूहरूलाई जबर्जस्ति गर्न कदापी पनि सिकाउँदैन । एकातर्फ बाइबलले यस्तो सिकाउने अनि अर्कोतर्फ ख्रीष्टियानहरू बलजफ्ती वा प्रलोभनमा पारेर मानिसहरूलाई वाक्क पार्ने । यो कुरा घामझैं छर्लंग छ कि कहीं न कहीं समस्या त पक्कै छ ।
ख्रीष्टियानझैं देखिने केहि अनौठा समूहको प्रवेश नेपालमा पनि भएको छ । चिटिक्क कपडा लगाएर घरघर डुल्ने उनीहरूले पनि बाइबल नै पढ्ने भएका कारण धेरैले उनीहरूलाई नेपालका सम्पूर्ण ख्रीष्टियानहरूको प्रतिनिधि सम्झन्छन् । त्यो गलत सोचले नै अहिलेको ख्रीष्टियान-विरोधी भावनाहरू जन्माएको हो ।
उनीहरू वास्तवमा ख्रीष्टियानहरू होइनन् । बाइबल र ख्रीष्टियमतको आधारभूत कुराहरूलाई समेत् स्वीकार नगर्ने उनीहरूले आफू ख्रीष्टियान हुँ भनेर कहिल्यै भन्दैनन् । आफ्नो घरमा आउने वा बाटोघाटोमा भेटिने उनीहरूलाई तपाईंहरूले सिधै “के तपाईं ख्रीष्टियान हो?” भनेर सोध्नुभयो भने उनीहरूले जरुर “होइन” भन्नेछन् ।
५) ख्रीष्टियानहरू किन प्रलोभनमा पारेर धर्मपरिवर्तन गराउँछन् ?
तिमी ख्रीष्टियान बन, त्यसवापत् तिमीलाई म यति पैसा दिन्छु भनेर कुनै ख्रीष्टियानले कसैलाई भन्दैन । लागेका आरोपहरूमध्येका अधिकांस कोही कसैले फैलाइदिएको अफवाहहरू मात्र हुन् ।
६) ख्रीष्टियानहरूद्वारा संचालित एनजीओ/आइएनजीओहरूले किन ख्रीष्टियान धर्मलाई नै बढावा दिन्छन् ?
ख्रीष्टियानहरूले चलाएका एनजीओ/आइएनजीओहरूले एउटा कामको लागि पैसा ल्याएर धार्मिक सवालमा लगाउनु हुँदैन । उनीहरूले जे कामको लागि ल्याएको रकम हो त्यसैमा लगाउनुपर्छ । आजसम्म कुनै एनजीओ/आइएनजीओबाट त्यसप्रकारको काम भएको पनि छैन ।
७) ख्रीष्टियानहरूले चलाएका बालगृहका बालबालिकाहरूलाई किन ख्रीष्टियान नै बनाइन्छ ?
कुनै पनि आमाबाबुले आफ्नो घरमा जन्मेको नवजात शिशुलाई सोधेर उसको धर्म निर्क्यौल गर्दैन । एउटा हिन्दुले आफ्नो बच्चालाई नसोधिकन नै उसको न्वारन गरिदिन्छ, मुस्लिमले आफ्नो छोरालाई नसोधिकन नै उसको खतना गरिदिन्छ । यसरी हामी स्पष्ट हुन सक्दछौं कि आफ्नो आमाबाबुले बालबालिकाहरूमाथि आफ्नो रीतिरिवाज तथा चालचलन लागु गराउनु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यो उनीहरूको अधिकार पनि हो । यसमा आजसम्म कसैले प्रश्न उठाएको छैन ।
नेपालले समेत् हस्ताक्षर गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) १९६६ को धारा १८ को उपधारा ४ ले यसरी उल्लेख गरेको छ :
अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रको यस धाराले कानूनी बाबुआमा (जसमा बालगृह संचालकहरू पनि पर्दछन् ) लाई आफ्नो संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई आफ्नै आस्थामा हुर्काउन पाउने अधिकार दिएको छ र हाम्रो देश नेपालले पनि यसमा आफ्नो समर्थन जनाइसकेको छ । यसरी हामी स्पष्ट हुन सक्दछौं कि बालगृह संचालक हिन्दु, मुस्लिम, बुद्धिष्ट, ख्रीष्टियान जोसुकै भए पनि बालबालिकाहरू १८ वर्ष नपुग्दासम्म संरक्षककै आस्थामा हुर्काउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ ।
सबैले निसंकोच आआफ्नो आस्थामा बालबालिकाहरूलाई हुर्काइराखेको भए तापनि ख्रीष्टियान समुदायलाई मात्रै तोकेर दोष्याइनुको प्रमुख कारण अनाथ बालबालिकाहरूको पक्षमा ख्रीष्टियान धर्मावलम्वीहरूको ठुलो लगाव हुनसक्छ ।
ख्रीष्टियानहरू आफ्नो संख्या बढाउनका लागि मात्रै सेवाका कामहरू गर्दैनन् भनेर सबैले बुझ्नु जरुरी छ । पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ: “परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो: अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु, र आफूलाई संसारबाट निष्कलंक राख्नु ।” याकूब १:२७
घटना विवरण समाचारका लागि योग्य/अयोग्य के छ भनेर नबुझिकनै संचारमाध्यममा ल्याइनु, आरोपित व्यक्तिको तर्फबाट एउटा पनि कुरा नलेखिनुले नेपाली संचारजगतले यहाँको ख्रीष्टियान समुदायप्रति अन्याय गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
हावा नचली पात हल्लिंदैन भन्ने कुरा एक हदसम्म सहि नै हो । तर पात हल्लिनलाई हावा नै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकहिले बाँदरहरू आइदिन्छन् र पातमात्रै होइन, हाँगैसमेत् हल्लाईदिन्छन् । (उदाहरणको निम्ति प्रयोग गरिएको “बाँदर” शव्दलाई नकारात्मक रूपमा नबुझ्नुहुन अनुरोध छ ।)
मृत्यूसंस्कार जस्तो अति भावनात्मक विधि पूरा गर्ने सवालमा सरकारले ख्रीष्टियान समुदायलाई पूरै वेवास्ता गर्नु सुहाउने विषय पक्कै होइन । सरकारले सबै जिल्लामा समाधिस्थलको निम्ति ख्रीष्टियान समुदायलाई जग्गा उपलव्ध गराउनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन भने स्पष्ट रूपमा आफ्ना निम्ति समाधिस्थल आफै किन्न निर्देशन दिनुपर्छ र त्यो ठाउँको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
ख्रीष्टियानको बच्चा जनैपूर्णिमा वा इदको बिदा घरमै बसेर कटाउनेछ, तर ख्रीष्टमसको दिन बिहानै पोशाक लगाएर विद्यालय जानेछ । किनकि अब उसो ख्रीष्टमसमा सार्वजानिक विदा हुनेछैन, उसको विद्यालयमा साविकमा झैं पढाइ हुनेछ । गैह्र-सरकारी तथा व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं ख्रीष्टियानहरू ख्रीष्टमसको दिनमा आफ्नो काम गर्न बाध्य हुनेछन्, किनकि उत्सव मनाउने उनीहरूको अधिकार हरण गरिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको ख्रीष्टमस बिदा कटौतीको निर्णयले नेपाली ख्रीष्टियान समुदायलाई निकै ठुलो भावनात्मक चोट लागेको छ । दशैं, तिहार वा अन्य थुप्रै चाडका थुप्रै बिदा धेरै नभएको हाम्रो देशलाई एउटा समग्र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने “ख्रीष्टमसको एक दिन बिदा” धेरै भएको छ ।
१०) ख्रीष्टियानहरूले अरूहरूको सम्मान किन गर्दैनन् ?
“आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैं प्रेम गर्नु” भन्ने बाइबलको आज्ञालाई कसरी कोही ख्रीष्टियानले नजरअन्दाज गर्न सक्ला ? ख्रीष्टियानहरूले अरू आस्थाका मानिसहरूलाई अति सम्मान गर्दछन् ।
« ख्रीष्टियन स्पोर्टस फेलोसिप नेपालको फुटबल प्रतियोगिता जेठ १५ मा हुने
मेरो बाँचा »
Bethel Saving and Credit... बचत गर्ने बानीले ज... 116 views | by NC Reporter | posted on December 21, 2017